दाङमा २ लाखसहित ७ जना जुवाडे पक्राउ : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ५ दाङमा २ लाखसहित ७ जना जुवाडे पक्राउ
दाङमा २ लाखसहित ७ जना जुवाडे पक्राउ
तुलसीपुर । दाङको तेघरामा जुवाको खालबाट २ लाख सहित ७ जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहाहगनरपालिका–९ तेघरा निबासी प्रज्ज्वल शर्मा, घोराही उपमहानगरपालिका–२ निबासी रोहन खाती, धिरन शाह, सुनिल पुन मगर, पंकज पन्त, होमबहादुर केसी र विजय गाहमगर रहेको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी मुकुन्द जिसीले जानकारी दिएका छन् ।
जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीबाट गएको प्रहरी टोलीले गएराति २ लाख २० हजार ७ सय नगद र तास बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ओपेन्द्र बस्नेत - June 11, 2021 0
सशस्त्र प्रहरीमा ‘व्यापक अनियमितता’को आशंका
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘व्यापक अनियमितता’ भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर र विस्तृत छानबिन थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका ओलीले जनता समाजवादी...
प्रदेश २ को नामकरण विवाद सुल्झाउन सांसदहरु सक्रिय
जनकपुरधाम । जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्न दलहरुबीच सर्वसम्मति भएपछि प्रदेशको नामकरण विवाद सुल्झाउन प्रदेशका सांसदहरु सक्रिय भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो अडानमा...
मुम्बईको सान र हैदरावादको सम्भावना
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 1, 2020 0
युएइ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति दुई खेल सम्पन्न भए । पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध मुम्बइ इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर बंगलोरविरुद्ध सन...
दैलेखमा एकै दिन ९१ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ६२९ पुग्यो
Breaking News Dhruba Lamsal - June 15, 2020 0
दैलेख । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड –१९) को संक्रमण सँगै दैलेखमा एकैदिन ९१ जनामा कारोना ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । सोमबार ९१ जनामा कोरोना...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - April 23, 2021 0
सीमामा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन अपिल
प्रदेश Roshan Shrestha - April 3, 2020 0
जनकपुरधाम । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले कोरोना भइरस (कोभिड —१९) को सम्भावित जोखिम हुन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश...
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - September 13, 2020 0
बागलुङ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा आइतबार विहानगएको पहिरोले पुरिएर दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । जैमिनी नगरपालिका–१ टुनीबोट र वडा–५ दमेकमा पहिरोले घर पुरिँदादुई महिलाको...
लिभरकुसेनको सहज जित
Not-to-be-missed Kumar Raut - May 20, 2020 0
म्युनिख । बायर लिभरकुसेनले जर्मन बुन्डेस लिगामा सहज जित निकालेको छ । लिभरकुसेनले वेर्डेर ब्रेमेनमाथि ४–१ को सहज जित निकालेको हो । लिभरकुसेनको जितमा...
लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? डुब्नु हाेला है !
रमेश लम्साल - June 8, 2021
बिमला पाण्डे - June 10, 2021